Samsung သည် Galaxy S8 ပင်လယ်ဓားပြများကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင် | Androidsis
ဟိုဆေး Alfocea | | တရုတ် Android, Samsung
တောင်ကိုရီးယားဖွား Samsung ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အသစ်ပြသခဲ့သော Galaxy S2017 နှင့် S8 Plus ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ မနေ့ကငါပြောမယ် ဒီမှာ Androidsis မှာ6GB RAM နှင့် 128 GB Internal Storage ကိုအိန္ဒိယသို့ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုကျွန်ုပ်တို့အထူးအထူးထုတ်ဝေမှုအကြောင်းပြောရန်လိုအပ်သည်။ Samsung Galaxy S8 ပင်လယ်ဓားပြများ.
၏ပစ်လွှတ်ဆင်နွှဲရန် ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်ဓားပြများ - လူသေများမပြောကြပါ (စပိန်နိုင်ငံတွင် "ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်ဓားပြများ - Salazar ရဲ့လက်စားချေ" အဖြစ်တင်ဆက်သည်) ရုပ်ရှင်ကမှုတ်သွင်းထားသည့် Galaxy S8 ကိုအထူးထုတ်ဝေခဲ့သည်a.
Samsung သည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုစတင်ရန်ဒစ္စနေးနှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ပူးပေါင်းခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယခင်က၎င်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Galaxy S6 ၏အထူး Iron Man ထုတ်ဝေမှု (Marvel Entertainment ကို Disney ကပိုင်ဆိုင်သည်) ဖြင့်အလားတူလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ , အထူးထုတ်ဝေ ကာရစ်ဘီယံ၏ပင်လယ်ဓားပြများ အထူး box တစ်ခုနှင့်အတူတူပင် terminal တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ.
Terminal ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များကိုတရုတ်လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် Weibo မှတဆင့်မျှဝေပြီး mydrivers သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကာရစ်ဘီယံ Edition ၏ Samsung Galaxy S8 Pirates များကိုအတည်ပြုခဲ့သည် တရုတ်မှာရောင်းပြီးပြီ စတိုးဆိုင်မှတဆင့် JD.com။ လက်ရှိစျေးနှုန်းသည်ယွမ် ၅,၉၈၈ ဖြစ်ပြီးညီမျှသည် အကြောင်းကို 780 ယူရို ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်။
ယခုအချိန်တွင် Galaxy S8 ၏ဤအထူးထုတ်ဝေမှုသည်အခြားစျေးကွက်များသို့ရောက်ရှိမည်လားဆိုသည်ကိုမူမသိရသေးသော်လည်းမည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို hardware အဆင့်တွင်မည်သည့်ခြားနားချက်မျှမရှိဘဲအတူတူပင်ဖြစ်သည်။
Pirates of the Caribbean ဆောင်ပုဒ်နှင့်ထုံးစံအတိုင်း UI အပြင်အပြင်ပစ္စည်းအနေဖြင့်ရတနာရင်ဘတ်နှင့်အတူတင်ပို့သည်။ က (အတု) ကိုရွှေလက်စွပ်နှင့်စမတ်ဖုန်းအမှု အရေအတွက်ကန့်သတ်ထုတ်ဝေခြင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung သည် Galaxy S8 Pirates ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
Teclast 98 4G၊